Ningbo Hilectro Power Technology Co., Ltd ndiye basa chikuru Haitian Drive, uyo nyanzvi mukugadzira yemagetsi forklift, stacker, nzvimbo motokari, golfcart etc. The kambani iri Kuomerera muuzivi Haitian Group "High Quality, mukuru kunyatsoshanda uye simba kuchengetedza ", uye aiming panguva unokupai yakanakisisa kirasi zvigadzirwa kuti vatengi.
The kambani iri muna Industry Zone pakati Beilun inova imwe zvikuru zvengarava munyika. Nharaunda mafekitari anofukidza 110 thous mativi mamita. Vaine Multi inogadzirwa mitsetse vane kugona pagore riri pamusoro 10 thous anoita forklifts, boka rine yepamusoro yokuedzwa centre panguva iyoyowo.
Kuunganidza pamwe nounyanzvi nevatungamiri, kambani ine mukuru mugumo R & D chikwata. Nokuva zvipfuwo uye mhiri kwemakungwa ruzivo, chikwata ari chekunatsiridza pakati forklifts dzose, uye kuedza kuti rakava Pamusoro bhizimisi iri indasitiri.
Single AC motokari nemotokari CPD30KJ